Soosaarayaasha & Alaab-qeybiyeyaasha Qaata FTTH | Shiinaha FTTH Warshad qaata indhaha
ZHR1000M FTTH Faa'iidada Qalabka Fibre
Tusmada ZHR1000M Mini Optical node waa waxqabad aad u sareeya, kufiican kalsoonida, qarashka ku baxa qarashka yar ee mugga ah, kunafiican shabakada Fiber To The Node / Fiber To Home (FTTH). Astaamaha • Joogtaynta 40MHz -1002MHz. • Kordhiye sameeyaha 'Gallium arsenide' oo loo adeegsado tusmo waxqabad wanaagsan. • Waxaa jira halbeeg qiyaaseed (ama Ingiriis ah) dekedda wax soo saarka inta jeer ee raadiyaha iyo dekedda korantada ee DC12V ~ 15V oo madaxbanaan. • Aluminium yar yar oo shaashadda dhinta ah, oo si qurux badan u qaabeysan, oo ku wanaagsan isticmaalka guriga. • Isticmaal SC / ...
ZHR860MF Qalabka Fudud ee Micro
Fiber Codsi shabakadda guriga (FTTH). Feature U isticmaal faybar shabakadda guriga. Guryaha adag aluminium dhinta-shubay. Isku xira galinta SC / APC iyo wax soo saarka RF oo leh iskuxiraha dumarka ah ee F. Iyada oo tilmaame koronto geliya 2-marxaladood oo LED ah. Baaxadda awoodda gelinta -10 ~ + 3dBm Heerka wax soo saarka 75 ~ 80dBuV. Dhisida-in shaqada AGC. Kordhiyaha dhawaaqa hooseeya ee lagu sameeyay tikniyoolajiyad riixid. Isticmaal awood aad u yar ＜ 2.0W. Halbeegyada Halbeegga Halbeega Index Indhaha Indhaha dhererka nm 1550 Awood gelinta dBm ...
Dhismaha FTTH Optical Receiver-in WDM ZHR860MD
Dulmarka guud ZHR860MD waa waxqabad sare iyo aqbalaad qaade sare oo lagu kalsoonaan karo. Waxaa la ansixiyay qalabka wax lagu baaro ee noocyo kala duwan oo firfircoon, iyadoo la ogaanayo waxqabadka xakamaynta otomaatiga ah (AGC) ee heerka wax soo saarka RF ee calaamadaha korantada ee korantada ee baaxad weyn oo firfircoon sida -10 ~ -3dBm wareegga. Muuqaaladda Ballaadhinta Howlgalka waa 47 ~ 1000MHz. Hal-waddo soo-saarka calaamadda RF-yar, waa mid dhaqaale iyo mid wax ku ool ah. Waxay leedahay tusayaal koronto siiya iyo koronto. Waxqabadka optical auto gain control (AGC) function. Iyada oo PO ...
FTTH Micro Optical aqbalana ZHR100L
1.Overview ZHR100L Mini Optical Node waa waxqabad aad u sareeya, kufiican kalsoonida, kubixinta kharashka korontada, mug yar, oo ufiican shabakada Fiber To The Node / Fiber To Home (FTTH). 2.Features 1) 1310nm iyo 1550nm daaqad shaqeyneysa oo ikhtiyaari ah 2) Soo noqnoqoshada 40MHz -1002MHz 3) Gallium arsenide amplifier oo loo adeegsaday tusmo waxqabad wanaagsan. 4) Waxaa jira halbeeg metrik (ama ingiriis ah) dekedda wax soo saarka inta jeer ee raadiyaha iyo dekedda korantada DC12V ~ 15V oo madaxbanaan. 5) Aluminium yar yar oo dhinta k ...